Iran: Manao Fanentanana Hiarovana An’i Isfahan Ireo Mpiaro Ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Iran: Manao Fanentanana Hiarovana An'i Isfahan Ireo Mpiaro Ny Tontolo Iainana
Voadika ny 18 Oktobra 2017 3:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, 简体中文, 繁體中文, Italiano, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily 2009 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Mampiasa fitaovana fampahalalam-baovao antserasera mba hiarovana ireo tsangambato ara-kolontsaina isan-karazany toy ny The Si-o-se Pol na “33 Pol” (tetezana misy andohalambon-tetezana miisa 33), ravaka ara-javakanto iray ao afovoan-tanàna manatantara ao Isfahan (Esfahan) Iran ireo Iraniana mpiaro tontolo iainana. Misy ankehitriny ny fifandirana eo amin'ireo manampahefana te-hanangana tetikasa metro vaovao sy ireo olom-pirenena voakasika manerana an'i Iran izay matahotra ny fahasimbana mety aterak'izany.
Nanoratra taratasy misokatra ho an'ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena i Shahin Sepanta mba hiaro an'i Isfahan, renivohitry ny fanjakan'i Persiana teo aloha, tsy ho tratran'ny faharavana. Nanoratra ity bilaogera ity fa ny filankevitry ny tanànan'i Isfahan no nanapa-kevitra, tsy misy fanadihadiana fiomanana ampy, hanamboatra tonelina metro eo akaikin'ity ravaka ara-javakanto tsy manam-paharoa ity.
Nanohitra ity tetikasa tsy mitombina ity ny vahoaka ao Isfahan, sy ireo fikambanana tsy miankina maro ary nangataka tamin'ny manampahefana mba handavaka tonelina lavidavitra kokoa an'ity faritra manan-tantara ao an-tanàna ity, ary hampiasa fepetra fisorohana ho fampihenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Na izany aza, nanohy ny fandaharan'asany ny filan-kevitry ny tanàna, tsy niraharaha izany hetsi-panoherana izany.
Rehefa mieritreritra fa Isfahan, amin'ny maha tanàna kosmopolita azy, dia ahitana toerana manan-tantara sy manan-danja maro izay tsy an'ny vahoaka Iraniana ihany fa heverina ho toy ny vakoka iraisan'ny olombelona, zon'ny olon-drehetra eto an-tany no mankafy ny fahatsarany, ary koa, mandray andraikitra amin'ny fiarovana azy manoloana ireo fandrahonana rehetra mety handrava azy.
Tao amin'ny GreenNews, namaky lahatsoratra izahay fa nanery ny manampahefana hilaza fanambarana mampiadihevitra amin'ny fivoaran'ny tetikasa metrô ny fitomboan'ny isan'ny hetsi-panoherana. Namoaka sary (tahaka ny etsy ambony) ny GreenNew, izay mampiseho ireo milina fanamboarana eo akaikin'ny '33 Pol (tetezana misy andohalambon-tetezana 33).
Misy ihany koa ny fanangonan-tsonia natao mba hampitsaharana ny tetikasa metro ary efa nahazo sonia 1000 hatramin'izao.